Ndepi Inowanikwa paIndaneti Vashandi Vanotanga Rwendo Rwokutenga? Semalt Nyanzvi Inopa Kuongorora Kunokosha
Zvinyorwa zvese zvinhu zvinowanikwa mumutengo wevatengi zvinogona kutengwa paIndaneti. Ichi chiyeroshopper inoparadzwa nokuda kwekusarudza pane chimwe chinhu chiri nezviuru zvevatengesi vanokwikwidza vanopa chigadzirwa paIndaneti panguva imwe chete.
Mutengi Wekutengesa Mubudirira we Semalt Digital Services, Frank Abagnale, anotsanangura kuti shopper iri paIndaneti inotanga kusunungura kupera kwekusagadzikana - buy cheap dedicated server hosting.
Muna 2016, shanduro yepamusoro yevatengi yakagadzirwa ne Power Power Review yakagadzika kuti yakawandavashandi vekutenga vanotanga kutsvaga chimwe chinhu chavanoda pane zvose maAmazon neGoogle. Iyo yekupedzisira yakawana 35% yevatengi vose vaitsvaga neyekarekutora 38% chikamu. Saizvozvowo, 21% yevashambadziri vanosarudza kutanga kutsvaga kwavo mune zvekutengesa e-commerce website inosanganiswa nemamwe mabhuku.Kune rumwe rutivi, eBay inotakura 6% yeboka iri sevashambadziro avo vakasarudza. Zvakawanikwa zvakasimbisa mufaro mumusika, zvaveyakasunungurwa nekambani yakakurumbira inonyanya kukoshesa kuongororwa kunokosha, kuverenga uye mubvunzo-uye-mhinduro. Mharidzo yavo yakanyanya kuwanarubatsiro kubva kune vashandi ve-e-commerce vakadai sevatengesi vedigidhi.
Kururamisa kwePower Reviews 'zvakawanikwa zvakasimbiswa zvakare gare gare gore irorocomScore yakaratidza huwandu hwekudzidza maitiro evatengi. Iyi tsvakurudzo haina kungobatanidza chete murwendo rwekutsvaga vatengi vekuInternet asiwooffline consumer. Mukutsvaga kwavo, 27% yevatengesi vakatendeukira kuAmazon nokuda kwekutanga rwendo rwekutenga..Nzira dzakarurama dzevanjini dzakawana 15%seyokutanga kwevatengesi. Zvinofadza kuti 13% yevakapindura vakatendeukira kune dzimwe nzvimbo dzekutengesa kuti vatengese zvinhu zvavo zvavakasarudza nazvoimwe 14% kutendeukira kune dzimwe nzvimbo dzekutengesa mawebsite. Vatengesi vanoshambadzira mafoni vakaratidzawo muongororo pa4%. Mireniyamu ane nguva dzosekunyanya kufarira kutenga kwepaIndaneti kudarika vatengesi vekare. Kusiyana kwakangooneka chete pakati pezviongorori zviviri ndezvishoma pasi kubva kutsvagainjini pano.
Kunyange zvakadaro, tinosvika pakuguma kwekutsvaga injini yekugadzirisa uyeAmazon ndiyo inotakura mapurisa ekutengeserana kwema digital, kugadzira kufarira nekushandura magetsi kukutengesa. Ndiwo nzvimbo yekucheka-huromakwikwi mune maitiro ekudhinda uye kutengesa hondo dzepamusoro-soro. Kunyange pane nhamba, mabhizimisi anokwanisa kuwedzera pazvikamu zviviri izviinogona kusvika nyore nyore uye inokonzera kusvika ku7% yezvavanotenga pamusika chikamu mune zvose zvigadzirwa. Chinhu chakanaka chaizova chikwata chepamusoro chevarumewebsite yeGoogle. Iyi webhusaiti inogona kuisa nyore kufarira 35% yevashambadziri paIndaneti uye imwe 38% muAmazon. Aya mafananidzoinomiririra mamiriyoni emadhora mubhizinesi uye nekuda kwezvibereko.
SEO maitiro anobatsira mabhizinesi ekuInternet kuti awedzere mararamiro avo kumaAmerica maviriuye kutsvaga kwepanyama. Chinangwa chikuru apa ndechokubvisa uye kutora vatengesi vepaIndaneti pakutanga kwetendo ravo rwekutsvaga muIndaneti. Tokuti uite izvi, unoda zvakadzama mapeji emakiti akazadzwa nehutano hwehutano nemashoko akakwana uye akakwana. Zviripo ndezvemambo mu SEO kuitira kuti iwe usakwanisa kukanganisa pamusoro pehuwandu hwemashoko uye tsanangudzo dzaunoshandisa.
Zvichiri pane zviri mukati, shandisa mazwi makuru maererano nemazwi anoshandiswa mumutengotsanangudzo inoratidzira mazwi aya vatengi vako vanoshandisa kutsanangura marimi yako kana chigadzirwa. Uyewo, ita zvigaro, zviitiko zvevachengeti, uye kuongorora kunoonekwakuti vabatsire mune kutendeuka kwekutengesa. Izvo sarudzo inoshandiswa kune e-commerce web site asi kunyange kune imwechete inogona kuvandudza pane zvekuvakwa,zvivako zvekugadzirisa, uye kushandiswa kwevashandi kwewebsite.